I-Maison Perlo Germano
Planaz, Valle d'Aosta, i-Italy
Ikamelo e-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ibungazwe ngu-Laura E Marco
I-chalet izungezwe uhlaza emgwaqeni oya ePlanaz; Izivakashi zinikezwa igumbi lokulala elinombhede wabantu ababili kanye nemibhede engu-2 yabantu abangabodwana enegumbi lokugezela elinamathiselwe.
Igumbi lizifudumeza ngokwalo lifakwe i-TV nokuxhumeka kwe-WiFi, njengakuyo yonke indlu. Ezindaweni ezivamile kukhona isitofu sezinkuni, i-TV ene-3d blu-ray player kanye nomtapo wezincwadi omkhulu wevidiyo. Esitezi esingaphansi kukhona nebhola letafula, itafula le-Ping Pong nendawo ebhayela enikezelwe amabhuzu nokushushuluza. Ehlobo, i-swimming pool nesitulo esinyakazayo siyatholakala
Ezihambelini kukhona umtapo wezincwadi ogcwele izinto eziningi eziqwala amatshe neqhwa; amamephu nezinhlelo zohambo lwe-off-piste skiing kanye ne-trekking.
umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 1 umbhede wosana, Umbhede wengane e-1
Itholakala imizuzu emibili ukusuka ku-SR44 eholela eGressoney S J, lapho ungathola khona izindawo zokuqala zokushushuluza, ezifinyeleleka ngemizuzu engama-20,
i-Maison ibekwe ngaphansi nje kwendawo yase-Coumarial lapho kuqalwa khona ukushushuluza eqhweni, ukugibela izintaba eqhweni kanye nemizila yokushushuluza enqamula izwe; ehlobo le ndawo inikeza imizila yokuhamba ngezinyawo ukuze uthole indawo yokulondoloza imvelo yaseMont Mars.
Ukuhamba ngemizuzu eyishumi, ngakwesokudla kwesigodi se-orographic, kuwudonga olukhuphukayo oluqanjwe ngoGabriele Beuchod, olufanele abasaqalayo hhayi, oluhlome ngezinkundla ezilodwa nezindlela ezinde, ukusuka ebangeni lesi-4 ukuya kwelesi-7.
Kusele imizuzu embalwa ukuhamba ungafika emfuleni waseGouffres de Guillemore.
Emnyango wedolobhana kunepaki ye-adventure esanda kwakhiwa enemizila eyisikhombisa yobunzima obandayo nethuba lokuwela i-Lys ngokusebenzisa i- tirollienne - isakhiwo sivulwa kuphela ehlobo.
Ibungazwe ngu-Laura E Marco
Kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesine kukhona ithuba lokudla nomndeni, ngenani eliphansi, unikeze umzuzwana wokuphila kanye nokudla okuhle. Ngokungafani nempelasonto abanikazi bawo bamatasa emsebenzini okwenza bangabibikho endlini kusukela ngo-11 kuya ku-23.30.
Phakathi naso sonke isikhathi sokuhlala, ngokuhambisana nezibopho zomndeni, sizotholakala ukuze sithole izincazelo kanye nezinkomba ngendawo abakuyo.
Mayelana nebhulakufesi, indawo yesiqandisi izotholakala nayo yonke into edingekayo ngesidlo sasekuseni sase-Italian "Faidate".
Kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesine kukhona ithuba lokudla nomndeni, ngenani eliphansi, unikeze umzuzwana wokuphila kanye nokudla okuhle. Ngokungafani nempelasonto abanikazi bawo…